အမေရိကန် တရားရုံး သည်တရုတ် ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ SMIC အား တရားစွဲဆို မှု အားလုံးကို ပယ်ချ ခဲ့သည် - Pandaily
အမေရိကန် တရားရုံး သည်တရုတ် ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ SMIC အား တရားစွဲဆို မှု အားလုံးကို ပယ်ချ ခဲ့သည်
Jun 10, 2022, 20:57ညနေ 2022/06/10 23:04:02 Pandaily
တရုတ် ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ Semiconductor Manufacturing International (SMICကယ်လီဖိုးနီးယား ဗဟို ခရိုင် အတွက် အမေရိကန် ခရိုင် တရားရုံး ရဲ့ စီရင်ချက် တစ်ခု ကို လက်ခံရရှိ ကြောင်း သောကြာ နေ့ က ကြေငြာ ခဲ့ ပြီး ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ လ ၁၅ ရက် နေ့ တွင် ကုမ္ပဏီ ၏ ကြေငြာချက် တွင် ထုတ်ဖော်ပြသ ခဲ့ သော အရပ်ဘက် အရေးယူ မှု အားလုံး ကို ပယ်ချ ခဲ့သည် ၊ သို့သော် ဘက် လိုက်၍ ပြင်ဆင် ၍ မရ ပါ ။
ကြေငြာချက် တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း OTCQX စျေးကွက် တွင် လူသိရှင်ကြား ရောင်းဝယ် သော SMIC Securities အများအပြားကို ၀ ယ်ယူ သည်ဟု စွပ်စွဲခံရ သူတစ် ဦး ၏ ကိုယ်စား တရားစွဲဆို မှု ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ တရားစွဲဆို မှု ကုမ္ပဏီ အများအပြား အမေရိကန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေ ကိုချိုးဖောက် သည်ဟု စွပ်စွဲ ။ ဆုံးဖြတ် ချက်တွင် တရားရုံးက တရားစွဲဆို မှုအား ပယ်ဖျက် ရန် ကုမ္ပဏီ၏ အဆို ကိုအတည်ပြု ခဲ့ပြီး တရားလို သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အယူခံ ဝ င်နိုင်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် SMIC သည် နယူးယောက် စတော့အိတ်ချိန်း မှ ၎င်း၏ အမေရိကန် ADS များအား ဆန္ဒ အလျောက် ဖျက်သိမ်း ရန် လျှောက်လွှာ ကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဌာနသည် SMIC အပါအ ၀ င် တရုတ် ကုမ္ပဏီ လေး ခုကို နာမည်ပျက် စာရင်းသွင်း ခဲ့သည်။ တစ် ပတ်အကြာတွင် တရားစွဲဆို မှုသည် ဒေသဆိုင်ရာ အမေရိကန် တရားရုံးတွင် ပေါ်ပေါက် ခဲ့သည်။
SMIC သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ် ထုတ်လုပ် မှုတွင် ခေါင်း ဆော င်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင်တရုတ် ပြည်မ ကြီးနှင့် ဟောင်ကောင်ရှိ ၎င်း ၏စီးပွားရေး ဝင်ငွေ သည်စုစုပေါင်း စီးပွားရေး ဝ င်ငွေ၏ ၆၄. ၀% ရှိပြီး မြောက်အမေရိက တွင် ၂၂. ၃% နှင့် Eurasia တွင် ၁၃. ၇% သာရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:SMIC သည် ဇန်နဝါရီ မှ ဖေဖော်ဝါရီ အထိ ဝင်ငွ ေဒေါ်လာ ၁. ၂ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် SMIC ၏လည်ပတ် မှုမှ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၃၅. ၆ ၃၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၃၂ ဘီလီယံ) သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂၉. ၇% တိုးတက်ခဲ့ပြီး အသားတင် အမြတ် မှာယွမ် ၁၀. ၇ ၃၃ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၄၇. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် SMIC ၏ပထမ သုံးလပတ် လည်ပတ်မှု ၀ င်ငွေနှင့် အသားတင် အမြတ် သည် ၆၂. ၆% နှင့် ၁၇၅. ၅% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက် မှုသည် ပိုမိုအားကောင်း လာခဲ့သည်။
ၾကာသပေတး ေန႔မွာ တရုတ္ chip ထုတ္လုပ္ သူSemiconductor ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ(SMIC) က ေနာက္ဆံုး ရလဒ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည္။
Industry Feb 11 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2022